SomaliTalk.com » 2011 » November » 23
Home » Archive Maalinta November 23rd, 2011
Shir jaraa,id oo ay maanta ku wada qabteen Reysalwasaaraha DFKMG iyo Radhika Coomarswamy magaalada Muqdisho.
Waxaa maanta kulan qado ah la qaatay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada FKMG ah Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wefdi sare oo ka socday UN-ka oo ay hogaamineysay Radhika Coomaraswamy oo ah kuxigeenka Xoghayaha guud ee Q/midoobay u qaabilsan arrimaha difaaca Caruurta, waxayna kulanka kadib wadaqabteen shir jaraa’id oo ay ku faah faahinayeen waxyaabaha ay ka wada hadleen. Wuxuu yiri waxay noogu...
Ra’iisul Wasaaraha oo maanta ka qeybgalay Kulan Dood wadaag ah, su’aalaha shacabkana ka jawaabayey
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Abdiweli Mohamed Ali ayaa maanta ka qeybgalay kulan ay soo abaabushay hay’ada CRD oo ah kulan noocii ugu horreeyey ee uu Ra’iisul Wasaare Soomaaliyeed ka qeybgalo isagoo ka jawaabayey su’aalihii ay weydiinayeen ka soo qeybgalayaashii kulanka iyo weliba Qurbo joogta Soomaaliyeed oo si toos ah internet ka ula socda barnaamijka. Kulankan oo ay soo abaabushay hay’adda...
Meydad Dad Soomaali ah Oo la soo Gaarsiiyay Isbitaalka Magaalada Sanca ee Dalka Yaman.
Iyadoo dalka yaman rabshadaha iyo dagaalada ka jira ay sii kordhayaan maallinba maalinta ka danbaysa ayaa waxa ay rabshadahasi saameeyeen dadka Soomaalida qaxootiga ah ee ku sugan gudaha dalka Yaman. Qaxootiga Soomaalida oo muddo dheer dalkaas ku sugnaa ayaa dhibaatooyinka ay la kulmaan waxaa ka mid ah dil Xarig iyo dhac loo gaysto. Rabshadaha ka dhaca inta badan gudaha wadanka Yaman ayaa dhibaatooyin...
Banbaano lagu weeraray guriga uu dagan yahay mid ka mid ah saraakiisha sare ee ciidamada dowlada KMG somaliya .
Bambada F1 ayaa lagu weeraray guriga uu magaalada ka dagan yahay admiral guuto faarax Cumar Axmed Farax qare oo ah taliyaha ciidamada badda somaliyeed waxaana bambaanadu burbur gaarsiisay dhismaha inkasta oo aan la sheegin dad wax ku noqday Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in ay maqlayeen qarax weyn kaasi oo cabsi galiyey dadkii goobta ka agdhowaa ,waxaana qaraxu dhacay xiligii salada maqrib iyo cishaha...
Kulan balaaran oo looga hadalyo guud ahaan Amniga Puntland , gaar ahaan kan Gobolka Karkaar ayaa lagu qabtay Jaamacadda Bariga Soomaaliya ee Magaaladda Qardho, kaas oo ay soo agaasimeen Maamulka iyo Ardayda Jaamacadda. Kulankaan ayaa waxaa ka qeyb galay Madaxweynihii hore ee Puntland Gen. Cadde Muuse Xirsi Boqor , Nabadoono,Ardayda Wax ka barta Jaamacadda iyo weliba qaar ka mid ah Qurba...